Maryooleey yaabkeeda - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By Miskiin-Macruuf-Aqiyaar, January 19 in Politics
Maryooleey ninkaan aflagaadeynaayo maxee ismoodaan yihiin? Sacuudiga markee tagaan waxa loogu waco ma ogyihiin.
Soomaalida oo falcelin laga naxo ka bixiyey imaatinka safiirka cusub ee Sacuudiga
Qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa si xadgudub leh oo laga naxo uga falceliyey kulan maanta waraaqaha aqoonsiga danjirenimo looga guddoomay Safiirka cusub ee dowladda Sucuudiga usoo dirtay Soomaaliya.
Dad badan oo ka falceliyey arrintaas ayaa si akhlaaqda ka baxsan u weeraray safiirka cusub ee dowladda Sacuudiga ay u soo magacowday Soomaaliya, marka loo eego dhanka midabkiisa oo uu yahay nin madow ah, ayaga oo hadallo cunsurinimo ah kula kacay safiirka.
Dadka qaarkood ayaa soo dirista safiir madow ah ku qeexay ina ka dhigan tahay in Sacuudiga yasayo Soomaaliya, waa sida ay qoraalka u dhigeen’e.
Hase yeeshee dadkaas ayaa ah kuwa aan xog badan ka haysan in Sacuudiga ay ku nool yihiin dad badan oo madow dhalad ah, oo xitaa qaarkood dalkaas uga horeeyey dadka Carabta ah.
Weerarka lagu qaaday safiirka Sacuudiga ayaa ceeb iyo magac dal ku ah umadda iyo dowladda Soomaaliyeed, waana in dowladda Soomaaliya ay cudur daar ka bixisaa arrintan.
Somali, I sometimes think their whole problems start with identity crisis
I just looked back at the sawirka uu la taaganyahay madaxweynaha. Dhererkiisa maba ii muuqan, ileen nin dheer waaye. Waxaa maqli jiray dadka gaaban notice taller people first. Marka Maakhiri awgaaboow maa tahay?